Axmed Yuusuf Guruujow Mid Hubso. W/Q: Cali Cabdi Coomay | Kaafi News
Axmed Yuusuf Guruujow Mid Hubso. W/Q: Cali Cabdi Coomay
Qaraarkii UNISOM ku imanaysay Soomaalilaan iyo Soomaaliyaa waxa la odhan jiray 814. Qaraarku wuxuu ahaa in Soomaaliya iyo Somaalilaan ciidan
Qoraal uu Axmed Yuusuf Guruuje uu ku soo qoray shabakada Hadhwanaagnews.com oo sumadiisu ahayd MISSED OPPORTUNITY ayaan doonayaa in hal ka idhaahdo: Axmed Qoraalkiisii wuxuu ku sheegay inay dawladii madaxweyne Cabdiraxmaan Tuur (AHN) ay diiday in hawlgalkii UNISOM ay ciidamo keenaan Soomaalilaan, hasayeeshee aanay taasi jirin, balse ay xukuumadii Cabdiraxmaan Tuur (AHN) dalbatay ciidamadii UNISOM. Markaa bal qoraalkan dhugo:
Hawlgalkii Qaramada Midoobay UNISOM ee Soomaalilaan
Qaraarkii UNISOM ku imanaysay Soomaalilaan iyo Soomaaliyaa waxa la odhan jiray 814. Qaraarku wuxuu ahaa in Soomaaliya iyo Somaalilaan ciidan la geeyo, waxaanu lagu horeeyey Soomaaliya. Dhinca Soomaalilaan Dawladii C/rahxmaan Axmed Cali (Tuur) ayaa codsatay in la keeno ciidan
UNISOM ah oo shan boqol oo askari ah, si ay u ilaaliyaan Dekedaha iyo Madaarada. Ka dib waxa Hargaysa imanayey nin la odhan jiray Jemes Jon oo madaxa ka ahaa xafiiska UNISOM.
Waxa mudaharaaday ururadii Bulshada Rayidka, sida Havoyoco, Sooyaal iyo Urur dumarka ahaa oo ay Shugri Bandare hogaaminaysay. Jemes ayaa dadkii mudaharaadayey kula hadlay Maktabada Masaarida agteeda oo xafiis uu ku lahaa. Ninkii wuxuu yidhi” waxa aan idiin balan qaadayaa inaan ciidan la keenin Soomaalilaan”. Dhacdooyinkaasi waxa ay dhacayaan laga soo bilaabo bishii Juun ilaa Ogosta ee sannadkii 1992-kii. Dadka mudaharaadayey oo gaadhayey qiyaas ahaan toban kun oo qof ayaa isa-soo hortubay xafiiskii ay UNISOM ku lahayd Hargaysa oo ku yaalay xarunta dembi baadhista (C.I.D) agteed, dadkii ayaa dalbaday in boodhka UNISOM la dejiyo. Boodhka waxa ku qoran” Kaalimadiina ayaan u joognaa.” Ka dib waxa galay xafiiskii UNISOM aniga oo Cali Qoryooley ah, waxa joogay xafiiska nin Faransiis ah, waxa aan ku idhi” dadku waxa ay leeyihiin boodhka ha la dejiyo, ka dib wuxuu yidhi” gacantooda ha ku dejiyaan, waana la dejiyey.
haddana dadkii ayaa yidhi calanka UNISOM ha la dejiyo, waana la dejiyey isna. Ninkii xafiiska joogay ee Faransiiska ahaa ayaa dadkii la hadlay, waxa aanu yidhi” waxa aan balan qaadayaa inaan xafiiska Qaramada Midoobay u gudbiyo inaan ciidamo la idiin keenin”. Dadkii ayaa sacabka tumay, ka dib hadana waxa aanu u dhaqaaqnay xafiiskii hayada UNDP oo ku yaalay fooqa Maaweel xaga koonfureed kaga beegan. Waxa xafiiska galay Yuusuf Cabdi Gaboobe, waxa joognay nin Ingiriis ah oo la odhan jiray Steven, isna dibada ayuu u soo baxay, waxa aanu dadkii ku yidhi waxa aan balan qaadayaa inaan u gudbiyo xafiiska Qaramada Midoobay inaan ciidamo la keenin Soomaalilaan.
Intaasi markii ay dhacay, waxa isna bilaabmay abaabulkii Shirkii Boorama iyada oo ahayd Bishii Diisamber ee sannadkii 1992-kii. Markii Shirkii Boorama uu dhammaaday ee lagu doortay Madaxweyne Cigaal iyo ku-xigeenkiisii Cabdiraxmaan Aw-Cali Faarax, ayuu Hargaysa yimid ninkii haystay Hawlgalka Ciidamada Maraykanka lagu keenay Soomaaliya oo la odhan jiray Joneten Howe. Markii uu in muddo ah joogay Hargaysa ayey khilaaf soo kala dhexgalay Madaxweyne Cigaal, ka dib wuxuu amray in si deg-deg ah loo xidho xafiiska UNISOM ee Hargaysa ka furnaa. Sidaasi ayuu dalka kaga baxay Jonethen Howe, waana horaantii Sannadkii 1994-kii.
Wixii intaasi ka dambeeyey wuxuu Madaxweyne Cigaal olole u galay in xilka laga qaado Xoghayihii Guud ee Qaramada Midoobay Buturs Qaali, oo Soomaalilaan si weyn uga soo horjeeday. Wuxuu dhalasho ahaan ka soo jeeday Dalka Masar, waxaana maskaxda kaga jirtay colaadda u dhexaysa Itoobiyo iyo Masar ee ku Saabsan Biyaha Webiga Niile, ee Masar ay doonaysay in ay isku dirto Soomaalida iyo Itoobiyaan, si webiga Niilka looga mashquuliyo Itoobiya. Madaxweyne Cigaal wuxuu qoray saddex iyo toban waraaqood oo uu Maraykanka iyo Yurub u diray, isaga oo ku sheegaya in uu Buturs Qaali khalday siyaasaddii Qaramada Midoobay ee Soomaaliya iyo Soomaalilaan. Aakhrikiina waa tii xilka uu waayey Buturs Qaali.